सडक नहुँदा बर्थिङ सेन्टरमा आउँदैनन् गर्भवती ! – इन्सेक
सडक नहुँदा बर्थिङ सेन्टरमा आउँदैनन् गर्भवती !
जुम्ला ०७६ असोज २६ गते
तातोपानी गाउँपालिकाको लामाबगरमा स्थानीयका लागि भन्दै ताम्ती स्वास्थ्य चौकी तथा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । तर, सहज सडक पहुँच नहुँदा बर्थिङ सेन्टरसम्म गर्भवती महिला पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।
गाउँपालिकाको केन्द्र तातोपानीदेखि दक्षिणी भेगमा पर्ने भेरीखोला साविकको ताम्ती गाविस हो । तातोपानी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ का करिब एक दर्जन गाउँमा अझै पनि यातायातको सुविधा छैन ।
लामाबगरसम्म सडक त पुगेको छ । तर, सवारी साधन गुड्न सक्ने अवस्था छैन । बर्थिङ सेन्टरसम्म पुग्न सहज सडक र एम्बुलेन्स नभएकै कारण स्थानीय महिला घरमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् ।
सडकको स्तरोन्नति भएन
एक दशक पहिले नै डिलिप परियोजनामार्फत सडक निर्माण गरिएको थियो । तर, सडक निकै जोखिमपूर्ण छ ।
सडक बनेको एक दशक बितिसक्दा पनि कर्णाली राजमार्गसँग जोड्ने तिला गाउँपालिकाको त्रिवेणीमा पक्की पुल निर्माण भएको छैन ।
पुल नबन्दा तातोपानी गाउँपालिकाका वडा नं. ७ र ८ का स्थानीय अहिले पनि पैदल यात्राको विकल्पबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
भौगोलिक रूपमा छरिएर रहेका गाउँमा एक ठाउँबाट अर्को गाउँ जान कम्तीमा पनि तीन÷चार घण्टा हिँड्नुपर्छ ।
दुवै वडाका स्थानीयलाई लक्षित गरी ताम्ती स्वास्थ्य चौकी तथा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ । पूर्वको बुढाबाडादेखि पश्चिमको सर्मी गाउँसम्मका महिला सुत्केरी हुन बर्थिङ सेन्टरमै आउनुपर्ने हो ।
तर, सडकको पहुँच नहुँदा जोखिम मोलेर अधिकांश महिला घरमै सुत्केरी हुने गरेको ताम्ती स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज भूपेन्द्र पाण्डेले बताए ।
पाण्डेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बर्थिङ सेन्टरमा ४५ जना महिलाको सुत्केरी गराउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, वर्षभर गरेर १९ जना मात्रै बर्थिङ सेन्टरमा आएर सुत्केरी भएका छन् ।
‘वार्षिक लक्ष्य अनुसार कहिले पनि बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने गरेका छैनन् ।’–उनले भने –‘यहाँका गाउँबस्ती बढी विकटमा भएका कारण पनि गर्भवती महिला तथा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउन कठिन छ । कहिलेकाहीँ जानकारी आएपछि सेवाग्राहीको घरसम्मै पनि पुग्ने गरेका छौँ ।’
अनमी वर्षा पाण्डेका अनुसार कतिपय महिला स्वास्थ्य चौकी ल्याउँदा ल्याउँदै बाटोमै पनि सुत्केरी हुने गरेका छन्  ।
जोखिम मोलेरै घरमा सुत्केरी गराउने गर्दा कतिपय महिलाको सालनाल फुक्न नसकेर ज्यान जाने गरेको अनमी कौशिला शाहले बताइन् ।
ताम्ती स्वास्थ्य चौकीमा तीनजना अनमी, इन्चार्जलगायतका कर्मचारी रातदिन नभनी सेवामा खटिएका छन् । अनमी पार्वती न्यौपानेले भनिन्–‘चौबिसै घण्टा सेवाका लागि तयार भएर बस्दा पनि सुत्केरी हुन आउने कमै छन् ।’
तातोपानी गाउँपालिकाले चालु वर्षमै एम्बुलेन्स खरिदका लागि योजना बनाए पनि बजेट भने विनियोजन गरेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स पक्का सञ्चालन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानले बताए । टोप्ला जोड्ने त्रिवेणी पुल नबन्दा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको उनले बताए ।
उनले भने–‘ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाको बजेटले पुग्दैन । राष्ट्रिय योजना हो । तर, वर्षौं भइसक्दा पनि पुल निर्माण भएको छैन ।’